रोशी ५ शिसाखानीमा वडास्तरकै प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक(पूर्ण पाठसहित) – NamoBuddha Khabar
रोशी ५ शिसाखानीमा वडास्तरकै प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक(पूर्ण पाठसहित)
शनिबार, बैशाख २४, २०७९ | २१:५२:३० |
लोक वहादुर लामा
रोशी–यो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सनदर्भमा काभ्रे जिल्लामा कतिपय पालिकाहरुमा उम्मेद्वारहरु व्यवस्थित र लिखित प्रतिवद्धताबिना नै चुनावी अभियानमा छन् ।
मौखिक प्रतिवद्धताको दायरा अनि तिनको भोली कार्यन्वयनको पाटो के कति हुन्छ त्यो यसै भन्न सकिदैन । तर रोशी गाउँपालिकाको वडा नं. ५ शिसाखानीमा माओवादी केन्द्रको वडा कमिटिले गठबन्धनसँग छलफल गरेर सामुहिक रुपमा वडा स्तरमै प्रतिवद्धतापत्र बनाएर जनतामाझ सार्वजनिक गरेको छ ।
माओवादी रोशि गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष नरमान वाईबा (कन्जन),एकीकृत समाजवादी जिल्ला सदस्य दल्साङ लामा,माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता एवं वडा अध्यक्ष तिर्थ बहादुर लामा,वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार लाल सिङ तामाङ र नेता मेग बहादुर लामाले संयुक्त रुपमा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यो वडामा अध्यक्षका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रको हुनुहुन्छ भने वडा सदस्यहरुमा नेकपा एकिकृत समाजवादी दलका तर्फबाट पनि रहनुभएको छ । उहाँहरु सबै माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हसिया हथौडा चिन्हबाट नै चुनाव उठ्ने जनाइएको छ ।
यसरी मिलेर वडा स्तरमै प्रतिविद्धतापत्र सार्वजनिक गरेर जनतामाझ जानुले वास्तवमा शिसाखानीको विकास व्यवस्थित र योजनाबद्ध रुपमा गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ ।
प्रतिवद्धतापत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ :
यतिबेला हामी १० वर्षे महान जनयुद्ध,१९ दिने जनआन्दोलन,मधेश तथा आदिबासी जनजाती आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै यसको कार्यन्वयनमार्फत मुलुकको समृद्धिका लागि स्थानिय तहको दोस्रो निर्वाचनमा जुटिरहेका छौ । हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरेको महान १० वर्षे जनयुद्ध,१९ दिने जनआन्दोलन र मधेश तथा आदीबासी आन्दोलनको बलमा मुलूकमा गणतन्त्र,संघियता,धर्मनिरपेक्षता,समानुपातिक समाबेशीता लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएको जगजहेरै छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न अत्यन्त पेचिलो बनिरहेको छ । हिजोको राष्ट्रघातीहरु आज राष्ट्रबादको नक्कली खोल ओढेर पूर्ण रुपमा जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन् । हामीलाई थाहा छ विगत लामो समयको कठिनपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त नेपालको यो व्यवस्था सबै कोल्याप्स गर्ने उद्देश्यले दुई दुई पटक जनताको सार्वभौम थलो संसद विघटन गरेर परिवर्तन र स्थायित्वको गफ लाउनेहरु तपाई हाम्रै घर आँगनमा आईरहेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनितिको परिदृष्यले के देखाउछ भने देश र जनता प्रति जिम्मेवार को छ भनेर यतिबेला नेपालको राजनितिक मोड फेरि भिन्न ढंगले अगाडी बढिरहेको छ ।
हामीले आशा गरेका थियौं नेपालको समृद्धिको मार्ग सुरु भयो,हामीले चाहेको सबैखाले परिवर्तनको मुद्धाले लय समाउने छ तर बिडम्बना केपि ओलीको स्वेच्छाचारी,प्रतिगनकारी प्रवित्तिले देश ठिक उल्टो गतिमा हिड्न थालेको हाम्रो निक्र्योल रहेकोले हालको व्यवस्थाको रक्षा गर्दै मुलुकको सकृद्धिका लागि नेपाली काँग्रेस,नेकपा एकिकृत समाजवादी सहितका दलहरुसंग गठबन्धन गरि स्थानिय तहको निर्वाचनमा होमिएका छौं ।
यहि आउदो बैशाख ३० गते स्थानिय तहको निर्वाचन हुदैछ । आजको अभिभारा नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै गर्ने पुरा गर्न सक्ने कुरा विगतको इतिहासले पनि पुष्टि गरेको छ । त्यसकरण पनि अबको ति बाँकी कार्यभारलाई पूर्णता दिन यस रोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ सिसाखानीका जनसमुदायले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अमुल्य मतदान गरि विजय गराउनु हुनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौ ।
हामीले भन्न चाहान्छौ कि यस सिसाखानीमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले जितेपछि विकास निर्माणको जग बसालिएको छ । विकासका पूर्वाधारहरु प्राय शुरुवात भएको छ । यहाँका जनसमुदायको लागि पर्याप्त भने होइन । पूर्णता दिने अभिभारा हामीबाट नै सम्भव छ । विगतको अनुभवलाई लिएर हामीले सिसाखानी र समग्र रोशी क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले जुझारु युवा नेता निष्ठावान, ईमान्दार, शालिन, दुरदर्शी र विकासप्रेमि व्यक्तित्व यसै सिसाखानीका क.मिम बहादुर वाईबा (ज्वाला) गाउँपालिकाका उपप्रमुुखको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । अर्का निष्ठावान, इमान्दार, विकासप्रेमि व्यक्तित्व क. लाल सिं तामाङ यसै वडाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुभएको छ । यहाँको विकास र समृद्धि हाम्रो पार्टीले उठाएका यिनै उम्मेद्वारहरुबाट मात्रै सम्भव रहेको उद्घोष साथ हामी समृद्ध सिसाखानी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
मुलुको व्यवस्था परिवर्तनका लागि १० वर्षे महान जनयद्ध, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदीबासी जनजाति आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका न्याय प्राप्तिका आन्दोलनका महान् शहीदहरु प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, रोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ सिसाखानी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ । साथै बेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु प्रति विशेष उच्च सम्मान गर्दै घाईते योद्धाहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । साथै महान शहीदहरुको सपनालाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको दक्षिणपूर्वमा अबस्थित यस रोशि गाउँपालिका वडा न.५सिशाखानि पुर्बमा सिपालि,दक्षिणमा महाभारत गाउँपालिकाको फोक्सिङटर र उत्तरमा नमोबुद्द नगरपालिकाको खनालथोकसंग जोडिएको छ । सदरमुकाम धुलिखेलबाट ३५ कि.मि. दुरिमा अव्यवस्थित छ । बाहुल्यताको हिसाबले ९९.९५ तामाङ समुदायको बसोबास छ भने नेवार दलित,ब्राह्मण तथा लोपोन्मुख हायु जाति समेत रहेका छन् ।
यहाँ दशैं,म्हेनिङ,ल्होछार,गोनेन्ह्य जस्त मुख्य चाडपर्व मनाउने गर्दछ । यस वडामा बिकासका प्रर्वाधारको हिसाबले ४ वटा बिद्यालाय,एक स्वास्थ चौकी,डुम्बालमा सामुदायिक भवन,बौद्धधर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र ५ वटा गुम्बा र ओम शान्तिको सत्ताल एउटा रहेको छ ।
यस वडामा सडक पूर्वाधारको विकास अघि बढेको देखिन्छ । बस्ती बस्तीहरु अस्थायी सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । यहाँको जनताको आयस्रोत कृषि नै रहेको छ् भने महाभारत लेकसंग जोडिएको कारण जल जमिन र जडिबुटी लागयत प्राकृतिक स्रोत र साधनको दृस्टिकोणले प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र हो ।
संविाधनले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख विकास र समृद्धिको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सिसाखानीको तत्कालिन,मध्याकालिन,दीर्घकालिन विकासको लागि वडास्तरिय विज्ञ समुह गठन गरि त्यस मार्फत प्राप्त सूझाबको आधारमा कार्यविधि तथा कार्ययोजना बनाई भ्रष्टाचारमुक्त समृद्ध शिसाखानी निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड अहिलेको खस्कदो शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी गुणस्तरीय र समायानुकुल बनाउन शिक्षाविद्,शैक्षिक सरोकारवाला, बुद्धिजिबी र राजनैतिक व्यक्तित्वहरुसंग समन्वय एवं अन्तरक्रिया गरि ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
ड्ड सामुदायिक विद्यालयहरुमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा बहुभाषिक तथा मातृभाषामा प्रदान गरिनेछ भने नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा अनिवार्य पठनपाठन गर्ने छ ।
ड्ड वडा भरिका कानुन,पत्रकारिता,ईन्जिनियारिङ,चार्टर्ड एकाउन्टेन जस्ता प्राविधिक उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहाने गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई स्नातकसम्म ५० प्रतिशत छात्रवृद्धिको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड विद्यालयहरुलाई भाषिक तथा साँस्कृतिक,अपाङगता,बालमैत्री तथा लैंगिकमैत्री वातावरण बनाईनेछ ।
ड्ड भुमेस्थान माविमा कृषि प्राविधिक विषयको पठनपाठन थाल्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, साथै ‘पढ्दै कमाउदै’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड सूचना प्रविधिसहितको शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।
ड्ड विदार्थीहरुको क्षमताको विकासका लागि अरिक्ति क्रियाकलापका साथै प्रतिभा पहिचानका कार्यक्रम गरिने छ ।
ड्ड अल्पसंख्यक हायु समुदायलाई शिक्षाको पहुँचमा जोडिने छ ।
ड्ड विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क प्याड वितरण गरिनेछ ।
ड्ड नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिअनुसार समुदायले पाउने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनेछ भने प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क र छिटो छरितो बनाउन स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक पर्ने सरसामाग्री र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न विपन्न समुदायको प्रति घर परिवारको ५० प्रतिशत बीमाशुल्क वडा सरकारले व्यहोर्ने छ ।
ड्ड हाम्रै सरकारको पहलमा निर्माणमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा व्यवस्थीत प्रसूति केन्द्र बनाइनेछ ।
ड्ड स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धि विशेष अभियान संचालन गरिनेछ ।
ड्ड भएका स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा दिन भौगोलिक हिसाबले टाढा भएको सिसाखानीको तल्लो भेगलाई पायक पर्ने स्थानमा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा केन्द वा स्वास्थ्य इकाई्र खोलिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक ६ महिनामा नागरिकको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य शिविर सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराईने छ ।
३.भौतिक पूर्वाधार विकास
ड्ड विगतको सरकारले पु¥याउन बाँकी चाँपडाडाँसम्को मोटरबाटो यथासिघ्र खोलिनेछ ।
ड्ड वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका र सदरमुकाम जोडिने सडकको स्तर उन्नति गर्दै पाँच वर्षभित्र कालोपत्रे गरिनेछ ।
ड्ड ज्योतिमार्ग, लुर्पुङ, सेलाङ घट्टेखोला मगरछाप दोकर्प तगायत हामीले लिङ्गरोडको रुपमा निर्माण गरेका सबै माटेबाटो प्राथमिकताका आधारमा ग्राबेल गरिनेछ ।
ड्ड दोभान,दोगा,बतासि डाडाँ,सिपाली सडकखण्डलाई स्तरउन्नति (ग्राबेल) गरि यहि मार्गबाट सिपाली डाडाँपारी सम्म जोड्ने यातायात संचालन गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
ड्ड वडा कार्यालय १ वर्षभित्र व्यवस्थीत ढंगले संचालन गर्नेछ ।
ड्ड पोटा खोलामा वडा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
ड्ड लुर्पुङलाई तामाङ सांस्कृतिक नमुना बस्तीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
४.खानेपानी तथा सरसफाई
ड्ड हाम्रै सरकारको पालामा धेरै ठाउँ बस्तीहरुमा खानेपानी र सिँचाईको आयोजनाहरु केहि सम्पन्न भईसकेको र निमार्णधीन रहेको छ,ति निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने र आवश्यकताको पहिचना गरी अन्य ठाउँमा समेत पोखरी निर्माण लगायतका काम गरिनेछ ।
ड्ड स्वच्छ खानेपानी निरोगी नागरिक भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरि प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन आवश्यकताको पहिचान गरी एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यन्वयन थालिनेछ ।
ड्ड वडास्तरिय खानेपानीलाई व्यवस्थीत र संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई नै जिम्मेवार बनाउन योजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिलाई हस्तारन्तरण गरिनेछ ।
ड्ड सिसाखानी भित्रका गाउँटोल र बस्तीमा रहेका पानीका मुहान,कुवालाई संरक्षण व्यवस्थापन गर्न खानेपानी मुहानको वरिपरि उचित वृक्षरोपण गरिनेछ ।
ड्ड व्यवसायिक रुपमा फर्म व्यवसाय सुरु गरेका १० वटा फर्मलाई ७५ प्रतिशत बाली तथा पशुबीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड निङ्गाले र गडिलाई माहुरी पकट क्षेत्र बनाउने र माहुरी पालन सम्बन्धि तालीम र अनुदान दिइनेछ ।
ड्ड व्यावसायिक कृषि,पशुपालन तथा अन्य फर्म संचालन गर्न बित्तिय सस्थाहरु संगको सहकार्यमा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ब्यज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड नीजि व्यतिm वा फर्महरुलाई व्यवसाय संचालन गर्न ठाउँको आवश्यक परेका स्थानिय बातावरणमा कुनै समस्या नपर्नेगरि वडाभित्रका सामुदायिक जमिन लिजमा दिन आवश्यक सहजिकरण गरिनेछ ।
ड्ड व्यवसायिक रुपमा पशुपक्षिपालन तथा नगदेबालीको व्यवसाय गर्न युवाहरुलाई विषय सम्बद्ध प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड कृषकको मनोबल वृद्धि गर्न वार्षिक किसान सम्मान कार्यक्रम गरिनेछ ।
ड्ड वडास्तरिय कृषि सामाग्री केन्द्र स्थापना गरि किसानलाई आवश्यक पर्ने रसायनिक मल,बिउबिजन, किटनाशक औषधी लगायतका सामाग्रीलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने साथै अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड दुधजन्य परिकारहरु बनाउन आवश्यक सीप विकास र प्राविधिक तालिम संचालन गरि दुधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट किसानहरुबाट छनौट गरि किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिई आवश्यक प्रविधिमा सहयोग गरिनेछ ।
ड्ड कृषि उत्पादनमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
ड्ड सिशाखानिलाई कृषि पर्यटनको रुपमा बिकास गर्न भौगोलिक र वातावरण सुहाउँदो फलफूल,तरकारी तथा पशुपालन सम्बन्धि कृषि फर्महरु खोल्न प्रोत्साहन दिइनेछ ।
ड्ड पर्यटन तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि लुर्पुङ्गलाई तामाङ सांस्कृतिक नमूना बस्तीको रुपमा विकास गरी फापरे ह्वाई,बोन्बो नाच,डाम्फु नाच,ताम्बा संस्कृतिको संरक्षण गरिनेछ ।
ड्ड पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निंगालेमा खेल मैदान बनाइने छ ।
ड्ड महाभारत लेकसम्म पैदलमार्ग बनाइने छ ।
ड्ड गडि र निङ्गालेमा सांस्कृतिक होमस्टे बनाइने छ ।
ड्ड निङ्गालेमा पिक्निक स्पोर्ट बनाइने छ ।
७.भाषा, धर्म, संस्कृति
ड्ड सिसाखानीभित्र रहेका सबै भाषा,धर्म संस्कृति,संस्कार र कलाको संरक्षण र विकासमा जोड दिदै समान व्यवहारको प्रत्याभूति दिइनेछ ।
ड्ड सरकारी कामकाजको भाषामा संविधानको मर्म अनुसार बहुसंख्यक जनताले बोलिने स्थानिय तामाङ भाषा नै वडा कार्यालयको प्रशासनिक प्रयोगमा ल्याइने छ ।
ड्ड वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो समुदायको परम्परागत पहिरन लगाई भेषभुषा संरक्षणको थालनी गरिने छ ।
ड्ड कला साहित्य, धर्म, संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशिल रहने व्यक्तित्वहरुलाई प्रोत्साहन, सम्मान तथा पुरष्कृत गरिनेछ ।
ड्ड ताम्बा,बोन्बो,लामा संस्कृति संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
ड्ड ंसस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी वृतचित्र तयार गरिने छ ।
ड्ड एक परिवार एक स्वोरोजगर बनाउन कृषि,पशुपालन लगायतका व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड लोकसेवा आयोग लगायत अन्य कुनै सरकरि जागीरमा समबेश हुन चाहाने युवाहरूलाईसबै कक्षाहरु संचालन गरिने छ ।
ड्ड सिशाखानिको बिकासका लागि युवा परिचालन गर्दै शिसाखानी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ड्ड खेल क्षेत्रमा युवाहरूलाई सङगठित गरि कुलत तथा लागुपदार्थ दुब्र्यसनीमा फस्न नदिने उद्देश्यले वडास्तरीय खेलकुद बिकास समिति गठन गरिने त्यमार्फत खेलकुदका कार्यक्रमहरु गरिने छ ।
ड्ड वडास्तरीय खेल मैदानको विकास गरिने छ ।
ड्ड खेलाडीहरुको विकासका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड बिद्यालाय स्तरबाटै खेलकुद बिकासको लागि अन्तर बिद्यालाय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
ड्ड सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपलाई ध्यानमा राखि सबै नगरीकलाई सचेतता तालीमको व्यवस्था गरिने छ ।
ड्ड वडा स्तरमै विपत व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरिने छ ।
ड्ड विपत व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने गरी तत्कालिन जनज्योति प्रबिको भवनलाई सामुदायिक भवनको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक काम गरिने छ ।
ड्ड सिशाखानि भित्र सुरक्षित र व्यवस्थीत विद्युत सेवा प्रवाहका लागि अव्यवस्थीत तारलाई व्यवस्थीत वाईरिङ र ट्रान्सफर्मरलाई उचित ठाउँमा सारी तिनको व्यवस्थापन गरिने छ ।
ड्ड आवश्यकता अनुसार स्टिलका पोल हाली सिशाखानिलाई काठको पोलमुक्त क्षेत्र बनाईने छ ।
ड्ड विद्युतमार्फत लघु उद्यम जस्ता कामहरु गर्न सहजता लागि आवश्यकता अनुसार थ्रि फेज लाइन जडान गरिने छ ।
ड्ड वनजंगललाई संरक्षण गर्दै नांगो पाखाहरुमा माटो सुहाँउदो वृक्षरोण गरिनेछ ।
ड्ड सामुदायिक वनमा जथाभावी रुख बिरुवा काट्ने,आगलागि गराउने कार्य बन्द गरिने छ ।
ड्ड वन क्षेत्रका वन्य जन्तु,पंक्षीको चोरी,सिकारी तथा तस्करीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिने छ ।
ड्ड विकास निर्माणका काम गर्दा वन तथा पर्यावरण मैत्री बनाउने प्रयास गरिने छ ।
ड्ड महाभारत वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरि महाभारत वनभित्र पाईने जडीबुटिको बजारीकरण मार्फत स्थानीय समुदायको आर्थिक विकासका लागि तिनको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ ।
ड्ड रोशी ५ को सिमानाभित्र परेको रोशी खोलामा अप्राकृतिक रुपमा माछा मार्ने कार्य बन्द गराउने ।
ड्ड कानुन अनुसारमात्रै ढुंगा माटो, बालुवा निकाल्ने जस्ता कार्य गराइने छ ।
ड्ड स्वच्छ र सफा रोशीका लागि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा क्रसरको माटो सिधै खोलामा पठाउन प्रतिवन्धित गर्नुका साथे वृक्षरोपण गरिने छ ।
ड्ड नापी भएका र लालपूर्जा नपाएका र नापी हुन छुटेका जग्गा धनीहरुलाई रीतपूर्वक दावी गर्न आएका जग्गादर्ता तथा लालपूर्जा वितरण तथा नापी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
ड्ड पहिरो जोखिममा रहेका गाउँबस्ती र पाखाहरुमा पहिरो रोकथाम कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ड्ड ग्रामिण सडक संचलन गर्दा वातावरणीय असर कम हुनेगरि मात्र विकास आयोजना गरिनेछ ।
१४.सूचना तथा सञ्चार
ड्ड जनतालाई सूचनाको हकको प्रत्याभुति दिलाउन वडा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गराई उत्तरदायी बनाईनेछ ।
ड्ड सिसाखानीको वडा कार्यालयमा नियमित रुपमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था तथा सूचना केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
ड्ड वडाका सूचनाहरु प्रवाहका लागि वडाको आफ्नै सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोगका साथै स्थानीय सञ्चार माध्यमहरु अपनाइने छ ।
ड्ड वडाका विशेष क्षेत्रहरुलाई फ्रि वाई फाई जोनको रुपमा विकास गरिने छ ।
ड्ड सञ्चारको पहुँच विकासका लागि अल्पसख्यक हायु तथा विपन्न समसुदायलाई रेडियो सेट वितरण गरिने छ ।
ड्ड युवा तथा विद्यार्थीहरुलाई सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड वडाका भएका काम प्रभावकारी बनाउन,उजागर गरी जनसहभागिता जुटाउन र नागरिकलाई सुसूचित पार्न भिडियो प्रोफाइलहरु निर्माण गरी सार्वजनिक गरिने छ ।
१५.जेष्ठ नागरिक,दलित,अपाङगता तथा असशक्त
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक हाम्रा मार्गदर्शक भएकोले उनिहरुको संरक्षण र सम्मान कार्यक्रम गनिरे छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ सेवा कार्यक्रम गरिने छ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक,दलित,अपांगता भएकाहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई सहज र सरल बनाइने छ ।
ड्ड शारीरिक रुपमा अशक्त (अपाङगता) भएकाहरुलाई शिक्षा,स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी लिई उनीहरुको अन्तरनिहित क्षमताको आधारमा सीप विकासको तागि तालिमको व्यवस्था निःशुल्क प्रदान गरि रोजगारीको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
ड्ड दलितहरुले हालसम्म धान्दै आएको जीवन निर्वाहमुखि आरन तथा बालीप्रभा जस्ता पुख्र्यौली पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायमा रुपान्तरण गरि आवश्यक नीति तयार गरिने छ ।
ड्ड अझै पनि समाजमा जातिय विभेदको समस्या रहेकोले जातिय छुवाछुत विरुद्ध जागरण ल्याउन जनप्रतिनिधिहरु राजनितिक दल,शिक्षक,बुद्धिजिबीहरु,दलित समुदाय संयुक्त रुपमा दशै मनाउने कार्यक्रम गर्ने ।
ड्ड महिला तथा बालबालिकाहरुको नेतृत्व विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरु संचालन गरिनेछ ।
ड्ड महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सीपमुलक तालिम संचालन गरि आयआर्जन वृद्धि गरनेछ ।
ड्ड वडास्तरको बालसंगठन निमार्ण गरि बालकल्याण कोषको स्थापना गर्दै उनीहरुमा रहेका अन्तरनिहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय निकाय,संस्था,उपभोक्ता समितिहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन उत्प्रेरणा दिइने छ ।
ड्ड दालित बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य सहज बनाइने छ ।
ड्ड यो क्षेत्रमा रहेका अल्पसंख्यक तथा हायु समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम गरिने छ ।
ड्ड जनतालाई सेवा सुविधाका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई छिटो,छरितो र पारदर्शी ढंगले अघि बढाइने छ ।
ड्ड प्रशासनीक सेवामा कम्युटर प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित,सरल र पारदर्शी बनाइने छ ।
ड्ड स्थानिय तहको विकास योजनाहरु कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन निरिक्षण गरि भ्रष्टाचाररहित प्रभावकारी बनाईनेछ ।
आदरणिय आमा बुबा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु
यतिबेला फेरि पनि तपाई हाम्रो सामु स्थानिय निर्वाचन आइसकेको छ । यो निर्वाचनले नै तपाई हाम्रो भाग्य र भविश्यको निर्धारण गरिने कुरा यहाँहरु सामु राख्दै यो निर्वाचनमा आफ्नो अमुल्य मताधिकारलाई सहि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौं । तपाई सामु हामीले विगतको निर्वाचनमा बाचा गरेका काम पूरा गरेपनि अझै धेरै कामहरु बाँकी नै रहेकोले फेरि पनि त्यो अपूरो काम पूरा गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।
तपाईको घर आँगनमा पक्कैपनि विकासको नाममा जनतालाई भ्रममा पार्दै हाम्रो गाउँबस्तीमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन सिमित व्यक्तिको मुठ्ठिमा कब्जा पार्न खोज्ने परनिर्भर बनाउन खोज्ने,गाउँलाई पुरानै अवस्थामा राखेर सम्मुनती खोज्ने पार्टी रोज्ने ? वा परिवर्तनको अभिभारा बोकेका जनताको असली सेवक हामीलाई रोज्नै ? यसको जिम्मा तपाई माथि छ । अव तपाईले नै फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ कि सिसाखानीको विकास र समृद्धिमार्फत हाम्रो वर्तमान र सन्तानको भाविश्य बनाउन । हामीलाई विश्वास छ तपाईले उक्त अमुल्य अवसरलाई कसैको ललाई फकाईमा गुम्न दिनुहुने छैन । सिसाखानीको विकास र समृद्धिमा तपाईको साथ र सहयोग फेरि पनि माओवादी केन्द्रलाई अवश्य रहनेमा हामी निर्धक्क छौं । हामी विश्वस्त छौं कि तपाईले भन्नुहुनेछ ‘उज्यालो नेपालको अभियन्ता माओबादी केन्द्रलाई मेरो एक मत ।’
रोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ सिसाखानी काभ्रे